Qalabka Isqurxinta Kuuriya Summada Vella ayaa hadda ku fidaysa Japan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Qalabka Isqurxinta Kuuriya Summada Vella ayaa hadda ku fidaysa Japan
Vella waxa ay bakhaarkeeda rasmiga ah ka furtay goobta ugu wayn ee e-commerce-ka Japan ee 'Qoo10' waxayna ku dhawaaqday in ay iibin doonto nasteexo, alaabo qurux badan oo nadiif ah iyada oo alaabteeda calanka ahi ay yihiin alaabada vegan oo ay ku jirto Vella Ultra Hydro Sun Essence.
Vella waa calaamadii ugu horeysay ee daryeelka maqaarka ee Kuuriya si ay u bilawdo khadka wax soo saarka qoorta waxayna iibisay in ka badan 1 milyan oo badeecooyin ah, iyada oo la aasaasay booskeeda Kuuriya.
Furitaankan rasmiga ah, macaamiisha Japan waxay sidoo kale ka iibsan karaan Vella Ultra Hydro Sun Essence Qoo10. Vella Ultra Hydro Sun Essence waa nambarka 1 nuxurka qorraxda iyo alaabta daryeelka qorraxda ee loo isticmaali karo sanadka oo dhan Wadiz.
U dabaal degaya furitaanka dukaanka rasmiga ah, Vella waxa ay bixinaysaa qiimo dhimis boqolkiiba 20 ah ilaa 26-ka November iyada oo loo marayo dhacdo qiimo dhimis ah oo lagu sameeyay Qoo10.
Dhanka kale, Vella oo ku fidday suuqa Japan laga bilaabo madal wax iibsiga online-ka ah ee Qoo10, ayaa ballaarinaysa gaaritaankeeda caalamiga ah iyada oo ka samaynaysa gudaha gobol kasta oo ka mid ah goobaha ganacsiga e-commerce ee ugu horreeya sida Shopee, oo ah goobta ugu weyn ee ganacsiga internetka ee Koonfur-bari Aasiya, iyo Amazon. shirkadda ugu weyn e-ganacsiga adduunka.